यी प्राकृतिक उपाय,जसले कपाल छिटो बढाउंछ::त्रिशुलीखवर
यी प्राकृतिक उपाय,जसले कपाल छिटो बढाउंछ
कपाल बाक्लो, नरम र कालो होस् भन्ने कसलाई रहर नहोला ।कपालले मानिसको सुन्दरताको पनि पहिचान गराउँदछ । कपालले मानिसको व्यक्तित्वका बारेमा अनेकौं सन्देश दिने गर्दछ ।महिलाहरुको लागि त कपाल सुन्दरताको गहना नै भनिन्छ । त्यसकारण हामी सबै सुन्दर, कालो र लामो कपाल चाहन्छौं । तर कतिपयको कपाल एकदमै ढिला बढ्ने समस्याबाट हैरान छन् । केही प्राकृतिक उपाय अपनाएर कपाललाई तिब्र रुपमा बढाउन सकिन्छ ।
तेल मसाज कपाललाई लामो गर्ने सबैभन्दा राम्रो प्राकृतिक उपाय हो । मसाज गर्नुभन्दा पहिले तेललाई हल्का तताउनुहोस् र मसाज गर्नुहोस् । मसाजबाट कपाललाई पोषण प्राप्त हुन्छ ।
अण्डाको सेतो भागमा थोरै जैतूनको तेल वा मह हालेर राम्रोसँग फिट्नुहोस् र यसलाई कपालमा लगाए एक घण्टासम्म छोडिदिनुहोस् । त्यसपछि यसलाई स्याम्पु लगाएर राम्रोसँग नुहाउनुहोस् । यस्तो गर्नाले कपाललाई चाहिने आवश्यक पोषक तत्व पूर्ती हुन्छ र कपाल राम्रोसँग बढ्छ ।
एक कप मेहेन्दी पाउडरमा आधा कप दही मिसाएर करिब २ घण्टा यत्तिकै छोडिदिनुहोस् । त्यसपछि यसलाई टाउकोमा लगाउनुहोस् र सुकेपछि पखाल्नुहोस् । मेहेन्दी लगाउँदा कपाल बलियो र बाक्लो हुने गर्दछ ।
अमलामा क्यारोटिनायडजस्ता पोषक तत्व हुने भएकाले यसले कपाललाई बढ्न सहयोग गर्दछ । अमलाको जूसलाई हप्तामा एक पटक कपालमा लगाउँदा कपाल तीब्र रुपमा बढ्ने गर्दछ ।
५. आलूको रसः
आलूले कपाललाई निकै छिटो बढ्न सहयोग पनि गर्दछ । नुहाउनुभन्दा पहिले टाउकोमा आलूको रस लगाउनुहोस् त्यसपछि १५ मिनेछ पछि कपाल पखाल्नुहोस् । आलूमा पाइने भिटामिनले तपाईंको कपाललाई लामो, बाक्लो र बलियो बनाउँछ ।
मेथीलाई पिन्नुहोस् र त्यसमा थोरै पानी हालेर पेष्ट बनाउनुहोस् । यसलाई कपालमा लगाएर आधा घण्टासम्म छोडिदिनुहोस् र पानीले पखाल्नुहोस् । यसले कपाल तिब्र रुपमा बढ्छ र कपालको चायाँ छ भने पनि हट्छ ।
७. कागतीको रसः
एक मुट्ठी बदामलाई रातभरी भिजाउनुहोस् र बिहान बदामको बोक्रा छोडाएर पिस्नुहोस् । यसमा दुई चम्चा कागतीको रस मिसाएर टाउकोमा राम्रोसँग मसाज गर्नुहोस् । त्यसपछि यसलाई २० मिनेटका लागि छोडिदिनुहोस् । सुकेपछि राम्रो पानीले पखाल्नुहोस् ।
८. एलोभेरा र महः
एलोभेरा र महलाई बराबर मात्रामा मिसाएर यसको पेष्ट बनाउनुहोस् र यसलाई टाउकोमा लगाएर ३० मिनेटसम्म छोडिदिनुहोस् । आधा घण्टापछि पानीले राम्रोसँग पखाल्नुहोस् ।जसले कपाललाई चायाँबाट छुटकारा दिलाउनुका साथै स्वस्थ, बलियो र लामो बनाउँछ । एजेन्सी ।